“Luka Modrić wuu u qalmay ku guuleysiga abaal marinta Ballon d’Or 2018” – Didier Deschamps – Gool FM
“Luka Modrić wuu u qalmay ku guuleysiga abaal marinta Ballon d’Or 2018” – Didier Deschamps
Dajiye December 23, 2018
(France) 23 Dis 2018. Macalinka xulka qaranka France ee Didier Deschamps ayaa qiray in xidiga khadka dhexe kooxda Real Madrid ee Luka Modrić uu u qalmay ku guuleysiga abaal marinta xiisaha badan ee Ballon d’Or 2018.
Luka Modrić ayaa saddex isbuuc kahor waxaa loo caleymo saaray abaal marinta Ballon d’Or 2018, sababa la xiriira in kooxdiisa Real Madrid uu kula guuleystay tartanka Champions League, isla markaana uu xulkiisa Croatia ku hogaamiyay inuu gaaro finalka koobka aduunka.
Sidoo kale Luka Modrić ayaa sanadkan ku guuleystay abaal marinta ciyaaryahanka ugu fiican Yurub iyo FIFA The Best, wuxuuna ahaan sanad u cajiib ah laacibka reer Croatia.
Hadaba macalinka xulka qaranka France ee Didier Deschamps oo arintan ka hadlay ayaa wuxuu yiri:
“Luka Modrić wuxuu u qalmay abaal marinta uu ku guuleystay ee Ballon d’Or 2018, inkastoo saddexda xidig ee reer France Mbappé, Varane iyo Griezmann ay sidoo kale u qalmeen inay ku guuleystaan abaal marintan”.
“Mbappé, Varane iyo Griezmann waxay ku soo guuleysteen koobka aduunka 2018 ee ka dhacay dalka Russia, waxayna sidoo kale gaareen guulo waaweyn”.
“Waxay i weydiiyeen sababta aan Griezmann kaga door biday xidigaha Mbappé iyo Varane codeynta abaal marinta Ballon d’Or 2018, saddexdaba way u qalmeen abaal marintan”.
“Balse ugu dambeyntii uma wada codeyn karo saddexda ciyaaryahan si ay booska koowaad u galaan, waxaan awood u lahaa in aan codkeyga siiyo kaliyo hal ciyaaryahan”.
Arsenal oo wajaheysa Dhibaato wayn oo dhanka Daafaca ah...(Arag SHAXDA ay ku soo gali karto Kulamada Liverpool iyo Brighton )
Manchester United oo qorsheeneysa in ay dalab xoogan ka gudbiso xidig muhiim ka ah kooxda Juventus